खुशीको खबरः बेलायतमा भाइरस रोक्नको लागि खोप निर्माण ! – Jagaran Nepal
खुशीको खबरः बेलायतमा भाइरस रोक्नको लागि खोप निर्माण !
एजेन्सी । बेलायती फार्मास्यूटिकल कम्पनी फाइजरले बनाएको कोविड १९ बिरूद्धको खोपले प्रारम्भिक क्लिनिकल परीक्षणहरूमा प्रभावकारिता देखिएको छ। बेलायत सरकारले ३० करोड डोजको आदेश दिएको यो जाभा खोप भाइरस रोक्नको लागि महत्वपूर्ण मानिएको आशाजनक खोप हो।
न्यूयोर्कमा स्थित फाइजर र अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरू र अस्पतालहरूले गरेको यस इन्जेक्सनको प्रारम्भिक मानव परीक्षणहरूले आशाजनक नतिजाहरू उत्पादन गरेको बताएका छन।
३६ वर्षका वयस्कहरूमा गरिएको परिक्षणमा सामान्यतया टाउको र थकान भए पनि कुनै खतरनाक साइड इफेक्टहरू देखा परेन । फाइनेरले यसको खोप बनाउने प्रयास गरे जसलाई बीएनटी १६२ बी १ पनि भनिएको छ।
यो आशाजनक परीक्षणको नतीजामा पछिल्लो उदाहरण हो। बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र इम्पीरियल कलेज लन्डनले बनाएको मानव परीक्षणमा यो खोपले सफलताको प्रारम्भिक संकेत देखाएको छ।
हिजो रसियाको सरकार हिसाबले खोप दर्ता गर्न विश्वमा पहिलो बन्न पुगेपनि वैज्ञानिकहरू शंंकास्पद थिए किनभने ४० भन्दा कम व्यक्तिमा परीक्षण गरिएको थियो र यो काम गर्दछ वा सुरक्षित छ भनेर सार्वजनिक रूपमा कुनै डाटा उपलब्ध गरिएको छैन।
फाइजर खोपको पहिलो चरणको परीक्षणको नतीजा प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका नेचरम प्रकाशित गरेको छ। फाइजर स्टाफसमेत समावेश गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले भने कि यो खोपले सफलतापूर्वक जुन व्यक्तिलाई दिइएको थियो त्यसको शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्पन्न गरेको छ।
फाइजरको ज्याब एक प्रकारको खोप हो जसलाई लिपिड न्यानो पार्टिकल भ्याक्सिन भनिन्छ, यसको अर्थ कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित आनुवंशिक सामग्री शरीरमा लिपिडले बनेको बुलबुले भित्र सार्छ जुन फ्याटी अणुहरू हुन्छन्।